ဝီကီမီဒီယာ အရင်းအမြစ်စင်တာ - Meta
၁ သင် သိလိုသမျှကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
၁.၁ ရောင်းရင်းဝီကီမီဒီယာသမားချင်း ဆက်သွယ်လိုက်ပါ!
၁.၂ မေးစရာ တစ်ခုခု ရှိပါလား?
၁.၃ လတ်တလော မေးမြန်းထားမှုများ
သင် သိလိုသမျှကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
ဝီကီမီဒီယာ အရင်းအမြစ် ဗဟိုဌာနသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဝီကီမီဒီယာသမားများအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်စမ်းသပ်မှုများ၊ ပရိုဂရမ် ပံ့ပိုးမှု၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ အပါအဝင် တိကျသေချာသော ဝီကီမီဒီယာ အရင်းအမြစ်များအား ရယူနိုင်ရန် တစ်ခုတည်းသော ဝင်ပေါက်နေရာ ဖြစ်စေရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့် ဝက်ဘ် ပေါ်တယ်လ်သစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ။ ရှင်းလင်းချက်ကို ကြည့်ပါ။
ဘယ်သွားရမှန်း မသိတော့ဘူးလား ? ကျွန်ုပ်တို့၏ walkthroughကို စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
လေ့ကျင့်ခြင်း နှင့် အဝေးရောက် အစီအစဉ်များ အပါအဝင် စည်းရုံလှုံ့ဆော်သူများ အတွက် အရင်းအမြစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံကိန်းများတွင် အကြောင်းအရာအချက်အလက်ပံ့ပိုးသူများအတွက် အရင်းအမြစ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံကိန်းများ၊ ရေးသားခြင်း ဘော့များ၊ Lua မော်ဂျူးများအတွက် code ပံ့ပိုးသူများ နှင့် မီဒီယာဝီကီသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပံ့ပိုးသူများအတွက် အရင်းအမြစ်များ။
ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ အခန်းကဏ္ဍအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်ရှိသူများအတွက် အရင်းအမြစ်များ။
အရင်းအမြစ်များအားလုံးကိုကြည့်ပါ စာရွက်စာတမ်းပြုစုခြင်း ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ဝေဖန်ပေးပါ
မေးစရာ တစ်ခုခု ရှိပါလား?
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Resource_Center/my&oldid=21917966"
Last edited on 21 August 2021, at 18:43
This page was last edited on 21 August 2021, at 18:43.